मनोरञ्जन Archives - Manaslu Post
Sunday December 8, 2019 |
बैबाहिक जीवनमा बाँधिइन् अभिनेत्री ऋचा शर्मा
काठमाडौं । अभिनेत्री ऋचा शर्माको बैबाहिक जीवनमा बाँधिएकी छन् । शनिबार लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका दिपेक्ष्य राणासँग उनको विहे भएको हो । दिपेक्ष लबिम मलका म्यानेजर हुन् । उनीहरुको विवाह समारोहमा दुबै पक्षका परिवार र केही निकट फिल्मकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।आफ्नो फेसबुक ह्यान्डलमार्फत दुलहीको भेषमा सजिएकी ऋचाले श्रीमानको हात समातेको तस्विर सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छन्, ‘जिन्दगीको अaर्को सुन...
‘दि कर्मा’ टीजर : बोल्ड अवतारमा परमिता राज्यलक्ष्मी राणा
काठमाडौं । आउदो १७ माघबाट देशभर रिलिजको तयारीमा रहेको फिल्म ‘दि कर्मा’को अफिसियल टीजर सार्वजनिक भएको छ । टीजरमा अभिनेत्रीद्वय परमिता राज्यलक्ष्मी राणा र नीता ढुङ्गाना, करण वर्मा र बुद्धी तामाङ देखिएका छन् । टिजरमा अभिनेत्री राणा बोल्ड अवतारमा समेत देखिएकी छन् । देवकुमार श्रेष्ठको निर्देशन रहेको फिल्म जय मिडिया म्यानेजमेन्ट र श्रीत फिल्मस् एण्ड इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको हो । फ...
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टी ग्ल्यामर भूमिकामा देखा पर्दै
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टी १३ वर्षपछि सिल्भर स्क्रिन फर्किएकी छन् । उनी फिल्म ‘निकम्मे’ को छायांकनमा व्यस्त रहेकी शिल्पा प्रियदर्शनको फिल्म ‘हंगामा–२’मा पनि अनुबन्धित भएकी हुन् । शिल्पा पहिलो पटक निर्देशक प्रियदर्शनको फिल्ममा काम गर्न लागेकी हुन् । फिल्ममा शिल्पा ग्ल्यामर भूमिकामा देखा पर्दै छिन । यो फिल्ममा उनी परेश रावलसँग देखिने छिन् । फिल्ममा यी दुई कलाकारसँगै मीजान जाफे...
“हावा चल्यो पात खस्यो पिपलु ” माैलिक गीत सार्वजनिक(भिडियाे सहित)
काठमाडाै । म्युजिक बैंक नेपाल अनामनगरमा रेर्कडिङ भएकाे निम शितल मगर,केसरी घर्ती मगर, निरु लामा र तिलक रोका मगर लिलकाे स्वरमा नयाँ सांगीतिक कोसेली “हावा चल्यो पात खस्यो पिपलु ” नामक गीत भर्खरै बजारमा आएकाे छ । हावा चल्यो पात खस्यो पिपलुमा अथार मगरात क्षेत्रकाे भेषभुषाकाे प्रयाेगले माैलिकतापन झल्किएकाे छ । गीतमा बिभिन्न शंका र उपशंकाले गर्दा बलियो सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्छ । त्यसैले सचेत रहेर सम्बन...
टुपिसमा ‘हरे राम’ लेखेपछि वाणी कपुर बिरुद्ध उजुरी
मुम्बई । केही दिन अघि बलिउड नायिका वाणी कपुरले एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिन् । बिकीनीमा प्रस्तुत वाणीले शेयर गरेको फोटोमा स्पष्ट देखिन्छ छातीमा ‘हरे राम’ लेखिएको छ । फोटो सार्वजनिक भएपछि उनको काफी आलोचना भयो । सोही विषयमा मुम्बई रेजिडेण्टले वाणी विरुद्ध धार्मिक भावनामा आहत पु¥याएको भन्दै उजुरी गरे । साथै वाणीलाई फिल्म उद्योगवाट ‘बाईकट’ गर्न आग्रह गरे । विवाद बढ्दै गएपछि वाणीले इन्स्टाग्...
नायिका निरुता सिंहकाे मुस्कान
यो बर्षको वैशाख २० गतेबाट रिलिज भएको चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’को प्रचारका क्रममा नायिका निरुता सिंह उपस्थित हुन सकिनन् । डेंगु लागेपछि मुम्बइमा नै उपचार गराउनु परेपछि निरुता आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रको प्रचारमा नै उपस्थित हुन पाइनन् । निरुता डेंगु रोगबाट थलिएपछि लामै समय उपचारमा रहिन् । केही दिन अगाडि विरगञ्जमा आयोजना भएको ‘नेपाली चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’मा निरुता सहभागी हुन आएकी थिइन् ।...
हरिवंशले यसरी मनाए आफ्नो ६३ औं जन्मदिन
काठमाडौं । नेपाली कलाकारीता क्षेत्रका एक हस्ती हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले आफ्नो ६३ औं जन्मदिन मनाउनु भएको छ । केही कलाकारको उपस्थितीमा नयाँ वानेश्ररस्थित रडियो अडियोले आयोजना गरेकाे कार्यक्रममा उहाँले जन्मदिन मनाउनुभएको हाे । जन्मदिनको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा हाँस्य कलाकारहरु मदनकृष्ण श्रेष्ठ, किरण केसी, दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे, दीपाश्री निरौला, कुञ्जना घिमिरे, सन्दिप क्षेत्री, हरिव...
दर्शक निराश नबनाउने चलचित्र ‘घामड शेरे’
केही वर्ष विदेश बसेर देशमा व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने उद्देश्य बोकेर नेपाल फर्किएको शेरबहादुरलाई माटो भरेर बनाइएको खोलाछेउको जग्गा भिडाइन्छ। यसरी भिडाएको जग्गा बाढीले बगाएपछि आफूमाथि भएको अन्यायका लागि ऊ खोलालाई मुद्दा हाल्न बाध्य हुन्छ। खोलालाई मुद्दा हालेपछि उसले मुद्दा जित्छ या हार्छ? यसैको सेरोफेरोमा बुनिएको तानाबाना नै 'घामड शेरे'को कथा हो। सिनेमालाई हेमराज बिसीले निर्देशन गरेका हुन्। ...
परम्परागत पोसाकको क्रेज बढ्दै
काठमाडौँ । मौलिक पहिरन हाकु पटासी, आङ्गी पाङ्देन, बख्खु दोचा, गुन्युचोलो, दौरासुरुवाल लगाउँदा लाज मान्ने युवापुस्ता अहिले यस्ता पहिरनले आफू ‘फेसनेबल’ भएको अनुभव गर्ने गरेका छन् । युवा पुस्तामाझ ह्यान्डलुम, ह्यान्डिक्राफ्ट तथा मेड इन नेपाल कन्सेप्टको माग बढेको फेसन डिजाइनरहरूको अनुभव छ । जसमा थरिथरि ढाका, जुट, अल्लो, सिसौ, जुट, हाकु पटासी, हेम, गाँजाजस्ता नेपाली उत्पादनबाट तयार पारिएका पहिरनप्रति...
चर्चित गायक जेबि ओलीकाे नयाँ सांगीतिक कोसेली “सम्बन्ध” सार्वजनिक
काठमाडाै । चर्चित गायक एबम् सर्जक जेबि ओलीले नयाँ सांगीतिक कोसेली “सम्बन्ध” नामक गीत भर्खरै बजारमा ल्याएका छन् । ओलीले बिगत देखी अहिले सम्म थुप्रै गीतहरु बजारमा ल्याइसकेका छन् । जे.बि. ओलीको सफल गीतहरु ठमेल बजारमा, दाङ घोराही तुलसीपुर, चौतारीको पिपल ढलेको, पैसा कमाउने, लगायत धेरै गीतहरु रहेका छन् । बिभिन्न शंका र उपशंकाले गर्दा बलियो सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्छ । त्यसैले सचेत रहेर सम्बन्ध जोगाउनु प...
म्याग्दी काफलडाँडामा पुन समुदायको कुलदेवता करबाकेली बाबाको पुजा सम्पन्न
म्याग्दीको काफलडाँडामा सबै समुदायको पहिचान झल्कने सङ्ग्रहालय निर्माण हुँदै
बागलुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही विजयी
देशमा कला र सीप सिकेर गरिखान सकिन्छः महिला नौमती बाजा समूह
तेह्रौं सागको पहिलो दिन नेपाललाई १५ स्वर्ण, कुल पदक २३
वैवाहिक जीवनमा बाँधिने भइन् नायिका ऋचा शर्मा
दाङको प्रदेशसभा सदस्यमा नेकपाकी विमला खत्री विजयी
पुरुष फुटबलमा नेपालद्वारा माल्दिभ्स पराजित
पौडीमा गौरिकाले जितिन् दोस्रो स्वर्ण
मुस्ताङबाट यस वर्ष ६५ हजार मेट्रिक टन स्याउ निकासी
इन्काउन्टरमा मारिए बलात्कारका चार आरोपी
माल्दिभ्समाथि ८४ रनको जित,आगामी यात्रा सकसपूर्ण
कल्पना थापा मगर